Samsung က Galaxy S5 ကိုအပေါ်စတင်ရန်တော်မူမည် 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ - သတင်း Rule
Samsung က Galaxy S5 ကိုအပေါ်စတင်ရန်တော်မူမည် 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ
Samsung ကသတင်းများအရရှေ့ဆက် Mobile World Congress တွင်၎င်း၏ Galaxy S5 ကိုစမတ်ဖုန်းကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်ကိုရီးယားဖုန်း MAKER (MWC) အပေါ် 23 ဧပြီလကထွက်ရှိမီကဖေဖေါ်ဝါရီလ.
ရုရှားဘလော့ဂါ Eldar Murtazin Samsung ကအပေါ်ညနေ6နာရီတွင်ဘာစီလိုနာအတွက် Galaxy S5 ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ.
Murtazin သို့အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးအထင်ကြီးငွေပမာဏကိုညှစ်နိုင် 140 ဇာတ်ကောင်, သူလည်း Galaxy S5 ကိုပတ်ပတ်လည်£ 630 မှာ၎င်း၏က Samsung Galaxy S4 ကိုယခင်ကဲ့သို့တူညီသောစျေးနှုန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားအဖြစ်, ထိုသို့တစ်ဦးအခုမှ version ကိုအတူပါလာလိမ့်မည်ဟု Touchwiz, ဖွယ်ရှိမနေ့ကအွန်လိုင်းပေါက်ကြားခဲ့ကွောငျးဗားရှင်း.
က Murtazin တစ် tweet သို့ညှစ်နိုင်အားလုံးင်နေစဉ်, ကကျနော်တို့က Samsung Galaxy S5 ကိုအကြောင်းသိရှိသမျှကိုမဖွင့်.
အဆိုပါအများကြီး-ဖောင်းပွဟန်းဆက်နှစ်ခုဗားရှင်းအတွက်ရောက်လာရန်မျှော်လင့်နေသည် – သတ္တုဝတ် High-end မော်ဒယ်, တစ်စျေးသက်သာပလပ်စတစ်မော်ဒယ်. အဆိုပါသတ္တုဗားရှင်းသတင်းများအရ Samsung ရဲ့ရှစ်-core Exynos စွမ်းအားဖြင့်ပါလိမ့်မည်6chip ကို, ပိုပြီးတတ်နိုင်ပလပ်စတစ်မော်ဒယ်တစ်ဦး Quad-core Qualcomm Snapdragon မည်ဖြစ်သည်စဉ် 805 Processor ​​ကို.
အဆိုပါ Samsung Galaxy S5 ကိုလည်း၎င်း၏နောင်တော်ထက်ပိုကြီးတဲ့ screen ကိုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထား, အွန်လိုင်းထင်ကြေး 2K HD resolution အကြံပြုခြင်းနှင့်အတူ. ဒီမျက်နှာပြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်အံ့သောငှါလည်းစကားပြောမယ့်, ငါတို့မူကားဆားတစ်ဦးဖြစ်တော့နဲ့ကောလာဟလယူ.
အခြားဖွယ်ရှိ features တွေတစ်ဦးကို iPhone 5S စတိုင်လက်ဗွေစကင်နာများပါဝင်သည်, တစ်ဦး 20MP ကျောဘက်-facing camera ကို, တစ်ဦးအဆင့်မြှင့် front-facing ကင်မရာက, Google ရဲ့ Android 4.4 KitKat သို့မိုဘိုင်း operating system နဲ့တစ်ဦး 2,900mAh ဘက်ထရီ.
သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Galaxy S5 ကိုစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ, Samsung ကလည်း၎င်း၏ဒုတိယမျိုးဆက် Galaxy Gear စမတ်နာရီအဖြစ် Samsung က Galaxy S5 ကို Mini နဲ့ Samsung Galaxy S5 ကိုမှန်ဘီလူးဟန်းဆက်မိတ်ဆက်ဖို့မျှော်လင့်ထား.
သင်က Samsung Galaxy S5 ကိုအကြောင်းသိရန်လိုအပ်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ roundup ထုတ်စစ်ဆေး. မီတာ
ဤဆောင်ပါး, Samsung က Galaxy S5 ကိုသတင်းများအရအပေါ်ကိုဖွင်လိမ့်မည် 23 ဖေဖေါ်ဝါရီလ, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် အဆိုပါ Inquirer နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်.
← အကောင်းဆုံးအလေးချိန် Gain ဗီဒီယိုများ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်း7စိတ်ကြိုက် စောင့်ကြည့်: အ Hunt ကအပေါ် Falcon ၏ငှက်ရဲ့မျက်လုံးကြည့်ရန် →